फेक अकाउन्ट समेत भेरिफाई भएपछि ट्वीटरले माग्यो माफी - Kantipath.com
फेक अकाउन्ट समेत भेरिफाई भएपछि ट्वीटरले माग्यो माफी
ट्वीटरका फेक अकाउन्ट पनि भेरिफाई भएको कुरा ट्वीटरले स्वीकार गरेको छ ।
केही समय अगाडि ट्वीटरले पब्लिक भेरिफिकेसन प्रोग्राम मार्फत थुप्रै अकाउन्टहरू भेरिफाइ गरेको थियो । जसमा केही फेक अकाउन्ट पनि रहेको पाइएकोले ती अकाउन्टहरूलाई कम्पनीले अहिले सस्पेन्स गरेको बताएको छ ।
कन्सपिरेडोर नोर्टेनो नामका एक वैज्ञानिकले यस्ता छ वटा भेरिफाई फेक अकाउन्ट पत्ता लगाए पछि ट्वीटरले यस विषयमा जानकारी पाएको थियो ।
उनले पत्ता लगाएका भेरिफाइड अकाउन्टहरू मध्येमा केही हालसालै मात्र खोलिएका अकाउन्ट समेत छन् भने केहीले हाल सम्म एउटा पनि ट्वीट पोस्ट गरेका छैनन् । त्यस्तै ती मध्य दुई अकाउन्टले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा स्टक बजारको फोटो राखेका छन् ।
‘भुलवश हामीले थोरै सङ्ख्यामा फेक अकाउन्टका एप्लिकेसनहरूलाई पनि भेरिफाई गरेका छौं । हाम्रो म्यानुपुलेसन एण्ड स्पाम नीति अन्तर्गत रहेर हामीले केही अकाउन्टहरू हटाइसकेका छौँ र उनीहरूको भेरिफाइड ब्याज पनि हटाइका छ,’ ट्वीटरले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ ।
यस घटनाले ट्वीटरको अकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्ने प्रकृयामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । ट्वीटरको अकाउन्ट भेरिफिकेसन मापदण्डहरूमा अकाउन्ट भेरिफाई हुनका लागि सो अकाउन्ट सक्रिय प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने गरेको प्रमाणको पनि आवश्यकता पर्दछ ।
Previous Previous post: प्रहरी जवानको लिखित परीक्षामा ७ हजार ३३४ जना उतीर्ण (नामावलीसहित)
Next Next post: देउवाको सपथग्रहणमा खड्गप्रसाद नजाने
स्मार्टफोन किन्न जादैहुनुहुन्छ, यी कुरा थाहा पाउनुहोस्
अवरुद्ध भएको सिडिएमए मोबाइल सञ्चालनमा
एप्पलले ल्यायो तीन वटा आइफोन-११,यस्ता छन् फिचर ?
कमजोरी पत्ता लगाइदिनेलाई गुगलले १७ करोड पुरस्कार दिने !
४0 सेकेण्ड अगाडी